Ungakusebenzisela Kanjani Ukubhala Kwakho Okubhaliwe Kwizinjini Zokusesha ngo-2014 | Martech Zone
NgeSonto, Septhemba 7, 2014 NgeSonto, Septhemba 7, 2014 Douglas Karr
Sisenezikhathi zokuqeqesha namakhasimende ethu ukucacisa imibuzo eminingi maqondana nezinjini zokusesha nokuthi ungabhala kanjani ukuze uthuthukise ukubonakala kwakho. Esobala nelula awubhaleli izinjini zokusesha, ubhalela abantu. Ngikholwa ukuthi ubuchule be-Google ekugcineni buqhubekele phambili ekuboneni ababhali negunya, ukwabelana nokwaziwa, izingcaphuno zokwahlukanisa, nokuqukethwe ukondla inhloso yosesho.
Ikhophi ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekusetshenzisweni kwe-Injini Yokucinga Esizeni. Kepha ngeGoogle ihlale icindezela izibuyekezo ezintsha ze-algorithm futhi iguqula imithetho yomdlalo, kunzima kakhulu ukugcina lokho okusebenzayo. Ngaphezu kwalokho, kunzima ukwazi ukuthi ngabe imizamo yakho yokwenza kahle iyalimaza kakhulu kunokulungela amazinga akho. Nawa amathiphu ayi-13 azokusiza ukubhala okuqukethwe okuku-2014. UMichael Aagard, OkuqukethweVerve
Ngo-2014, i-infographic igxile ngokuphelele kulwazi olufanele lomfundi. Angikholwa ngokweqiniso ukuthi lokhu kunjalo Ukubhalwa kwe-SEO, Ngingasho ukuthi amathiphu alula kakhulu ukukopisha amathiphu. Ngokombono we-SEO, kusenethuba lokuqinisekisa ukuthi okuqukethwe okuhle kwethulwa kahle kusayithi lakho, noma kunjalo. Izihloko eziphoqayo, izindatshana ezihambisanayo, isikhundla sendawo nokuzulazula, imidiya ebonakalayo, ukuphendula kweselula… zonke lezo zici zidinga ukuhlanganiswa necebo lakho lokuqukethwe ukuqinisekisa umuzwa omangalisayo womsebenzisi. Uma lokho kwenzeka, amazinga aphezulu enjini yokusesha kuzolandela!
Tags: 2014 i-SEOokuqukethweukukopishaizindlela zokubhalaUMichael Aagardukubhala umbhaloamathiphu wokubhala lokhoikhophi yokubhala yokusesha